အထွေထွေဗဟုသုတ Archives - San Thitsa
Zawgyi အလိုလိုနေရင်း ဘာမှမသုံးဘဲ ဖုန်းဘေလ်ကုန်နေရင် ဒါတွေစစ်ကြည့်ပါ… ခုပဲ ဖုန်းဘေလ်ထည့် ခဏနေ ဇီးရိုးကျပ် ဘာလို့ဖြစ်တာလဲ? အင်တာနက်လည်း မသုံး ဖုန်းလည်းမပြောဘဲ ဖုန်းဘေလ်တွေ ကုန်ကုန်သွားတာက ဒုက္ခတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အသုံးမပြုပေမယ့် ဖုန်းဘေလ်
Zawgyi ၅၀၀ ကျပ်တန် ထမင်းဆိုင်၊ ရေတက်ငါးစင်ရိုင်းနဲ့ လှူတော့ လှူတယ် လွဲနေတဲ့ ရွှေမြန်မာများ (လှူတတ်ကြပါစေ လှူနိုင်ကြပါစေ ) ၅၀၀ ကျပ်တန် ထမင်းဆိုင်၊ ရေတက်ငါးစင်ရိုင်းနဲ့ လှူတော့ လှူတယ် လွဲနေတဲ့ ရွှေမြန်မာများ
Zawgyi ခြတောင်ပို့မှာ ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ့ရပြီး လူတွေ အမျိုးမျိုးခေါ်နေကြတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းပစ္စည်းလေးတွေ. . . ရပ်စောက်မြို့တောင်ဖက် ၇မိုင်အကွာ ပိန္နဲကုန်းကျေးရွာမှာ ရှာတွေ့ထားတဲ့ ထူးထူးခြားခြား ပစ္စည်းလေးတွေပါ။ဒါလေးတွေကို ရှာတွေ့သူကတော့ Shwe Boon ဆိုတဲ့ အကောင့်ပိုင်ရှင်က ရှာတွေ့ထားပြီး
Zawgyi ကြက်တစ်ကောင်လုံးကို ဈေးပေါပေါရတယ်ဆိုပြီးဝယ်ခဲ့ရာ အိမ်ရောက်၍ ခုတ်ကြည့်ရာမှ ကြေကွဲသွားရသည့်အဖြစ် (ဈေးပေါတိုင်း ပိုက်ဆံနှာမျောပီးမ၀ယ်ကြပါနဲ့ ) လူသားတို့သည် စားဝတ်နေရေးအတွက် ကုန် ပစ္စည်းများဝယ်ယူသည့်အခါ ဈေးချိုချိုသာသာရသော ဆိုင်တွင်သာ ဝယ်ယူလိုကြသည်။ ယခုအခါတွင်လည်း ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ အိမ်ရှင်မတစ်ဦးသည် ဈေးထဲတွင်
Zawgyi ဝက်သားစားနိုင်ပြီလား မိတ်ဆွေ ( ၁ မိနစ်အချိန်ပေးဖတ်ပါ မဖတ်လိုက်ရလျှင်နောင်တရလိမ့်မည်) ရှေးရှေးတုန်းကရွာတရွာမှာ အလွန်ချစ်ခင်ကြသော ကျော်နိုင်နှင့် မောင်မြင့်ဆိုသော ငယ်သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိလေသည်။ သူတို့နှစ်ဦးလုံးသည် တနေ့လုပ်မှတနေ့စားရသော အခြေခံ လက်လုပ်လက်စား လူတန်းစားများဖြစ်သဖြင့် ခက်ခဲပင်ပန်းစွာဖြင့် ဘဝကိုဖြတ်သန်းလာကြရလေသည်။ အလုပ်ဆိုလျှင်လဲ
ထူးဆန်းတဲ့ မျောက်ကျောက်ရောဂါ ဗြိတိန်၊ အမေရိကန်၊ စပိန်နဲ့ ပေါ်တူဂီတို့မှာ ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေ
Zawgyi ထူးဆန်းတဲ့ မျောက်ကျောက်ရောဂါ ဗြိတိန်၊ အမေရိကန်၊ စပိန်နဲ့ ပေါ်တူဂီတို့မှာ ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေ ( ငဗစ်ပြီးတော့ လာပြန်ပြီ နောက်တမျိုးဟေ့ ) ထူးဆန်းတဲ့ မျောက်ကျောက်(Monkey Pox) ရောဂါတမျိုးဟာ ဗြိတိန်၊ အမေရိကန်၊ စပိန်နဲ့
သုညဘဝကပြန်စဖို့ဝန်မလေးသော သန်းကြွယ်သူဌေးကြီး၏ လွယ်ကူသောစီးပွားရှာနည်း
Zawgyi သုညဘဝကပြန်စဖို့ဝန်မလေးသော သန်းကြွယ်သူဌေးကြီး၏ လွယ်ကူသောစီးပွားရှာနည်း ဟိုတယ်တွင် လခစားလုပ်ကိုင်နေသော လူငယ်တစ်ယောက်သည် စီးပွားရေးစာအုပ်များ သူငှေးဖြစ်နည်းစာအုပ်များကို အမြဲဖတ်နေသော်လည်း တကယ်ကြီးပွားအောင် မည်သို့စပြီးလုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်နေသည်။ တစ်နေ့၌ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဦးဆောင်နေသော သန်းကြွယ်သူငှေးကြီးသည် အမှတ်မထင် သူငှေးဖြစ်နည်းစာအုပ်ဖတ်နေသော လူငယ်အား ‘ကောင်လေး’
၆၆၀၀ကျပ် ရင်းပြီး ဝယ်ခဲ့တဲ့ဘေထုပ်ကနေ ၆၄သိန်း၆သောင်းကျော် အမြတ်ရခဲ့တဲ့ ကံထူးတဲ့ဖြစ်ရပ်
Zawgyi ၆၆၀၀ကျပ် ရင်းပြီး ဝယ်ခဲ့တဲ့ဘေထုပ်ကနေ ၆၄သိန်း၆သောင်းကျော် အမြတ်ရခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ် ဘေထုပ်ရောင်းဝယ်ခြင်းကို နိုင်ငံခြားမှာတော့ thrift shopping လို့ခေါ်ပြီး အဝတ် အစား၊ အသုံးအဆောင်တွေကိုကျရင်တော့ vintage ပစ္စည်းတွေလို့ ခေါ်ပါတယ်။ အမှန်တော့ ဘေထုပ်ဝတ်ခြင်းဟာ ရှက်စရာမကောင်းပါဘူး။
အလွန်ရှားပါးကာရွှေထက်အဖိုးတန်ပြီး အကောင်တစ်သန်းမှာတစ်ကောင်တွေ့ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ ရွှေဝါရောင်ပုစွန်တစ်ကောင်ကိုရရှိခဲ့သည့်အမျိုးသမီး
Zawgyi အလွန်ရှားပါးကာရွှေထက်အဖိုးတန်ပြီး အကောင်တစ်သန်းမှာတစ်ကောင်တွေ့ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ ရွှေဝါရောင်ပုစွန်တစ်ကောင်ကိုရရှိခဲ့သည့်အမျိုးသမီး အလွန်ထူးဆန်းအံ့ဖွယ်ရာများဟာလောကတွင်နေ့ စဉ်နှင့်အမျှမြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှရှားပါးလွန်းလှသောအရာများကိုလူသားတို့ဟာတန်ဖိုးကြီးမာသောအခါများအနေဖြင့် အသိ အမှတ်ပြုထားတတ်ကြပါတယ်။ ယခုတွင်လည်းမကြာသေးမီကပျံနှံလာသောအွန်လိုင်းပေါ်မှပုစွန်တစ်ကောင်ဟာလူအများ ၏စိ တ်ဝင်စားဖွယ်ရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ထိုပုစွန်လေးတစ်ကောင်ကိုဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှအမျိုးသမီးတစ်ဦးက ကံကောင်းစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ ရွှေဝါရောင်ဖြစ်နေတဲ့ပုစွန်လေးဟာ အကောင်တ စ်သန်းမှာတစ်ကောင်တွေ့ရန်မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ရှားပါးပြီးတန်းဖိုးမဖြတ်နိုင်သောပုစွန်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေဝါရောင်ပုစွန်လေးကိုပိုင် ဆိုင်ထားပါကရွှေထက်ပင်အဖိုးတန်သောအရာကို ပိုင်ဆိုင်ထားရတာမျိုးဟုဆိုကြပါတယ်။
ဝယ်သူများနေတဲ့ ရွှေနှင့်စိန်အမှုန့်တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ဒေါ်လာ ၂,၈၀၀ တန်ဖိုးရှိ ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး ဆပ်ပြာတုံး….
Zawgyi ဝယ်သူများနေတဲ့ ရွှေနှင့်စိန်အမှုန့်တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ဒေါ်လာ ၂,၈၀၀ တန်ဖိုးရှိ ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး ဆပ်ပြာတုံး…. အခုဖော်ပြမဲ့ မိသားစုပိုင် ဆပ်ပြာကုမ္ပဏီဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ရာစုလောက်ကတည်းက ဆပ်ပြာများထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိတွင် ၎င်းဟာ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဈေးအကြီးဆုံးဆပ်ပြာတုံးကို ထုတ်လုပ်နေကြောင်းသိရပြီး သတင်းများအရ ၎င်းဆပ်ပြာတစ်တုံးဟာ